LEGO 10282 Adidas Superstar အတွက်သီးသန့်သဘောတူညီချက်ယခုရရှိနိုင်ပါသည်
06 / 09 / 2021 06 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 185 Views စာ0မှတ်ချက် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား, adidas, Adidas မူရင်း, Adidas မူရင်းစူပါစတား, Creator Expert, Jadlam ကစားစရာများ & ပုံစံများ, Lego, Lego Adidas, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, အဆိုပါ LEGO Group
ဤနှစ်အတွက် LEGO အသစ်များအတွက်လူကြီးများအတွဲများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်သဘောတူညီချက်သည်ယခုတွင်ရှိသည် Jadlam ကစားစရာများ & ပုံစံများ.
ယခုကျွန်ုပ်တို့၌အထူးလျှော့စျေးတစ်ခု ၀ ယ်ယူထားသည်ကိုယခုဖော်ထုတ်နိုင်သည် Brick Fanatics စာဖတ်သူများ - 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား၊ ပထမဆုံးသောအုတ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည် LEGO Group'spartဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ် Adidas နှင့်လက်တွဲခဲ့သည်။
ယခုသဘောတူညီချက်သည်လက်လီစျေး ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းပြည့်သည် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတားLEGO.com တွင်စတာလင်ပေါင် ၇၉.၉၉ ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးစုစုပေါင်း£ ၆၉.၉၅ ကိုသာနိမ့်ကျစေပြီးဤအသစ်ထွက်ရှိသည့်အစုံတွင်၎င်း၏ပထမဆုံးသောလျှော့စျေးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သီးသန့်လျှော့စျေးကိုရယူရန်ကုဒ်ကိုရိုက်ထည့်ပါ BF154 ၀ ယ်တဲ့အခါ checkout မှာ 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား Jadlam မှ သင်မရောင်းချရသေးလျှင်လက်လီရောင်းချသူ၏သစ္စာရှိအစီအစဉ်တွင်စာရင်းသွင်းရန်သတိရပါ၊ သင်၏နောက်ဆုံးအမိန့်စုစုပေါင်း၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းကိုနောင် ၀ ယ်ယူမှုများအတွက်ဖြုန်းတီးပါ။
စာရင်းသွင်းခြင်းအတွက်ရိုးရှင်းစွာအပိုဆုရမှတ်များရရှိနိုင်ပြီးသင်၏မွေးနေ့နှင့် Jadlam ၏ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်များကိုလိုက်ကြည့်ခြင်းဖြင့်နှစ် ဦး စလုံးပိုရနိုင်သည်။
ယနေ့ည ၁၁ နာရီ ၅၉ နာရီဗြိတိန်အချိန် (သို့) စတော့ရှယ်ယာများ ၀ ယ်ရန်ရှိသည် 10282 Adidas မူရင်းစူပါစတား at Brick Fanatics'လျှော့စျေး ဤလုပ်ငန်းစဉ်၌သင်အလွန်ကောင်းသော LEGO အစုံများအတွက်သင်သီးသန့်ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်လျှော့စျေးများယူခြင်းအပါအ ၀ င်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသောအလုပ်ကိုကူညီပံ့ပိုးပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
← Lego Marvel ၇၆၁၇၇ Ancient Village ၏သားရဲတိုက်ပွဲကိုပရိုမိုးရှင်းပိုစတာတွင်ပြန်လည်မြင်ယောင်လာသည်
ယနေ့အုတ်ပုံ - တိမ်တိုက် ၉ ကင်းစခန်း →